रक्सी र कोरोनाभाइरस: के तपाईं महामारीको समयमा धेरै पिउनुहुन्छ? - कल्याण | सेप्टेम्बर 2021
समाचार समुदाय चेकआउट समाचार, कल्याण घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, समाचार समुदाय, कल्याण कम्पनी, चेकआउट भारी खेल स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर
मुख्य >> कल्याण >> कसरी 'Quaran-tinis' मा काट्ने
कसरी 'Quaran-tinis' मा काट्ने
यो सँधै स cock्कटको बेलामा ककटेल घण्टा हुन्छ! केहि क्वारान-टिनिसका लागि समय! स्कूलहरू बन्द गरियो = आमाको रस दिउँसोबाट सुरु हुन्छ। यो सम्भव छैन कि तपाईंले गत वर्ष यो सामाजिक मेडियामा एक मेम्सलाई नदेखीकन वाaलाई आमन्त्रित नगरी बनाउनु भएको छ जुम खुसीको समय । प्रकृतिमा चंचल भएतापनि, यसको प्रभाव - महामारीको समयमा रक्सीको प्रयोगमा बृद्धि भएको छ - यो अझ गम्भीर छ। मदिरा र कोरोनाभाइरस पछिल्लो536 days दिनमा जोडदार जडित भएका छन्। जसरी केसहरू स्पाइक हुन्छन्, त्यसैले पिउँथ्यो। बार र रेस्टुरेन्टहरू बन्द भए पनि घरमा रक्सीको प्रयोग बढ्यो।
हुनसक्छ तपाईं एक सामयिक पेय हुनुहुन्छ, जसले सामना गर्न वाइनमा स्टक गर्नुभयो, वा एक टीटोटालर जसले राति बियर खानु शुरू गर्नुभयो अरू केहि गर्न बाँकी नै छ। दुर्भाग्यवस, त्यो अतिरिक्त मदिरा सेवन तपाईंको स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो नहुन सक्छ। तर त्यहाँ केही राम्रो समाचार छ: तपाईं यसको बारेमा केहि गर्न सक्नुहुन्छ।
महामारीले किन मानिसहरूलाई पिउन लगायो
महामारीको सुरुको हप्ताहरूमा समेत विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिए कि मानिसहरू COVID-१ p महामारीको तनावको सामना गर्न रक्सीको सेवन गर्न सक्छन। उनीहरूले टिप्पणी गरे कि चलिरहेको लकडाउन र दीर्घकालीन सामाजिक अलगाव जस्ता कारकहरूले मानिसहरू सामान्य रूपमा भन्दा बढी पिउन सक्छ। A कमेन्टरी अप्रिल २०२० मा प्रकाशित ल्यान्सेट पत्रिकाले उल्लेख गरे कि अलग्गिएको समयले जोखिममा हुने व्यक्तिहरूमा रक्सीको दुरुपयोग, पुनःस्थापन, र रक्सीको प्रयोगको विकारको सम्भावित विकास हुन सक्छ ...
भविष्यवाणीहरू सत्य भए। लगातार रक्सी र COVID-19 को धेरै प्रयोगको लागि धेरै व्यक्तिहरू निकटसँग जोडिए। A अनुसन्धान पत्र मा प्रकाशित जामा सेप्टेम्बर २०२० मा उल्लेख गरिए कि घरमा रहन आदेश जारी भएपछि रक्सीको बिक्री बढ्यो। अध्ययनको अनुसार मानिसहरु धेरै पिउँथे। र अन्वेषकहरूले यो पनि पत्ता लगाए कि सर्वेक्षण गरिएको महिलामा अत्यधिक मदिरापान गत वसन्तको तुलनामा गत वसन्तमा 41१% बढेको छ।
क्लिनिकल मनोविज्ञानी रिड हेस्टर, पीएचडी, वरिष्ठ विज्ञान अधिकारी चेकअप र विकल्पहरू , अचम्म मान्नु पर्दैन कि धेरै व्यक्तिहरूले कपी गर्ने संयन्त्रको रूपमा रक्सीमा परिवर्तन गरे। रक्सी सजिलैसँग उपलब्ध हुन्छन् र अपेक्षाकृत सस्तो हुन्छ। र यसले मानिसहरूलाई राम्रो महसुस गराउँदछ - पहिले। जोखिम तथ्यमा छ कि एक वा दुई राम्रो छ, तीन वा चार छैन, हेस्टर भन्छन्।
कति रक्सी धेरै छ?
केही व्यक्तिलाई उनीहरूले पहिलेभन्दा धेरै पिइरहेको महसुस पनि गर्दैनन् - वा उनीहरूले महसुस गर्दैनन् कि उनीहरू कति पिउँछन्।
tamiflu लिईसके पछि तपाइँ संक्रामक हुनुहुन्छ?
भर्खरै जारी गरिएको अनुसार अमेरिकीहरूका लागि आहार दिशानिर्देशहरू, २०२०-२25२। , मध्यम पिउने परिभाषा दुई पेय वा पुरुषको लागि प्रति दिन कम र एक पेय वा महिलाहरूको लागि प्रति दिन कम हो। र दिशानिर्देशहरूमा जोड दिइन्छ कि सामान्यतया, कम पिउँदा तपाईंको स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ। मदिरा दुरुपयोग र मदिरावाद सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थान (NIAAA) द्वि घातुमान पिउने परिभाषित गर्दछ पुरुषको लागि पाँच वा बढी पेय रूपमा वा दुई घण्टा अवधिमा महिलाको लागि चार वा बढी पेय रूपमा।
यदि त्यो धेरै सुन्दा यस्तो देखिन्छ भने, यसलाई विचार गर्नुहोस्: के एक पेय पदार्थ गठन के तपाईं सोच भन्दा कम हुन सक्छ। निर्देशन अनुसार , एक मादक पेय बराबर १ alcohol ग्राम (०. fl फ्लो ओज) शुद्ध रक्सीको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। त्यो एक १२ औंस बियर, of औंस गिलास वाइन, वा proof० प्रमाण आसुत आत्माहरु को १. fluid तरल पदार्थ औंस समावेश गर्न सक्छ। यसको मतलव वाइनको एक मानक बोतलले पाँच-औंस सर्विंग समावेश गर्दछ।
रक्सीको प्रतिरक्षा प्रणालीमा प्रभाव
रक्सीको बढेको प्रयोग जहिले पनि यस्तो कुरा हुन्छ जुन विशेषज्ञहरूलाई चिन्तित पार्छ किनकि यसले तपाईंको स्वास्थ्यलाई यति धेरै प्रकारले असर गर्न सक्छ। अत्यधिक रक्सीको सेवनले जीर्ण रोगहरू निम्त्याउन सक्छ जस्तै कलेजो रोग र पाचन रोगहरू। मध्यम मदिराको प्रयोग पनि गर्न सक्दछ मानसिक स्वास्थ्य अवस्थालाई बढावा दिन्छ , जस्तै उदासीनता र चिन्ता ।
तर COVID-19 को समयमा, तपाईं यो पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ कि रक्सीको प्रयोगले तपाईंको शरीरको कोरोनाभाइरससँग लड्न सक्ने क्षमतालाई कसरी असर गर्न सक्छ — वा संक्रमणबाट आफूलाई जोगाउन। उच्च खुराकमा रक्सीको दुरुपयोगले प्रतिरक्षा कोषहरूलाई क्षति पुर्‍याउँछ, यसले तपाईंको शरीरलाई संक्रामक रोगहरू विरूद्ध लड्न गाह्रो बनाउँछ, शामका कार्यक्रम निर्देशक मेरी गे, पीएचडी बताउँछिन्। शिखर सम्मेलन कल्याण समूह , एक बाह्य रोगी लत उपचार केन्द्र।
थप रूपमा, रक्सी पिउँदा, विशेष गरी अत्यधिक मात्रामा, तपाईंको अवरोधहरूलाई कम गर्‍यो र तपाईंलाई तपाईंको ब्यवहारको बारेमा कम सतर्क बनाउँदछ। तपाईं सामाजिक दूरीमा बिर्सनुभयो, वा तपाईं अन्य व्यक्तिहरूको वरपरको मास्क लगाउने, तपाईंको हात धुने वा हात सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने जस्ता चीजहरूको बारेमा कम सतर्क हुन सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई कोरोनाभाइरसबाट जोगाउन सहयोग गर्ने तरिकाहरूका रूपमा सिफारिस गरिन्छ।
कसरी पिउने मा कटौती
यदि तपाईं सोचमा हुनुहुन्छ भने, सायद थोरै असहज, यदि तपाईंले फिर्ता काट्नु पर्छ भने, यो एउटा संकेत हो। यो तपाइँको पिउने सम्बोधन गर्ने समय हो जब यो रमाईलो हुँदैन र यसले स्वास्थ्य, सम्बन्ध, काम, वा सामाजिक कार्यमा समस्या उत्पन्न गर्दछ, भन्छन् जोन मेन्डेल्सन , एमडी, रिया स्वास्थ्य, एक प्रविधिक सक्षम AUD उपचार प्रणाली मा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी। यदि अन्य व्यक्तिहरू तपाईंको मदिरा द्वारा परेशान छन्, यो समय कम गर्ने यो समय हो। यदि तपाईं मनपराउनुहुन्न कि तपाईं को हो रक्सी पिउँदा, यो कम गर्ने यो समय हो।
र तपाईं सक्छ पछाडि काट्नु धेरै मानिसहरूले सफलतापूर्वक आफ्नो मदिरा सेवन गर्न सक्दछन्, विशेष गरी यदि यो हाल बढेको छ भने, र उनीहरूसँग मदिरा सम्बन्धी समस्याहरूको लामो सूची छैन, हेस्टर भन्छन्।
त्यसोभए तपाईं कसरी गर्नुहुन्छ? यहाँ केहि रणनीतिहरू छन् जुन तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ:
तपाइँ कसरी बताउनुहुन्छ यदि तपाइँ ल्याक्टोज असहिष्णु हुनुहुन्छ
एक लक्ष्य सेट गर्नुहोस्। तपाइँ कति पिउनुहुन्छ भनेर एक सीमा सेट गर्नुहोस्, र यसलाई लेख्नुहोस् ताकि यसलाई खारेज गर्न गाह्रो हुन्छ।
तपाईको मदिरा संग्रहको आकलन गर्नुहोस्। यदि तपाईं आफ्नो घरमा कुनै रक्सी राख्नुहुन्न भने पछि कटौती गर्न सजिलो हुन सक्छ।
याद राख्नु। तपाईले कति र कहिले पिउनुहुन्छ लेख्नुहोस्। तपाईं डायरी वा तपाईंको फोनमा एक अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, जुनसैले तपाईंलाई ट्याबहरू राख्न सजिलो बनाउँदछ।
रक्सी-मुक्त दिनहरू तोक्नुहोस्। यदि तपाईं पूर्ण रूपमा पिउने योजना गर्दै हुनुहुन्न भने, तपाईं अझै पनि केही दिनहरूमा आफ्नो उपभोग घटाउनबाट अलग रहन सक्नुहुन्छ।
बिस्तारै पिउनुहोस्। जब तपाईं मादक पेय पदार्थमा लिप्त हुनुहुन्छ, तल झर्नु भन्दा यो सुस्त र स्वाद लिने प्रयास गर्नुहोस्। तपाई प्रत्येक पेयलाई गिलास पानी वा गैर-मादक पेयको साथ अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको ट्रिगरहरूको लागि बाहिर हेर्नुहोस् । मानिसहरू बानीका प्राणीहरू हुन्, हेस्टरले नोट गरे। ती पुरानो बानीहरू बदल्न तपाईंले सजिलै केहि नयाँ बानीहरू विकास गर्न सक्नुहुनेछ। के तपाईं एक निश्चित समय वा केहि परिस्थितिहरूमा प्रत्येक दिन दुई पेय पिउने बानीमा प्रवेश गर्नुभयो? यदि तपाईं यी ट्रिगरहरूमा ध्यान दिनुहुन्छ भने, तपाईं तिनीहरूलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। ट्रिगरहरू शक्तिशाली हुन्छन्, तर समयको साथसाथै तपाईं ती ट्रिगरहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न र व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, हेस्टरले भने।
अझै पछाडि काट्न समस्या भइरहेको छ? यदि तपाईंले यी रणनीतिहरू काम गरिरहेको पाउनु भएको छैन भने, यो समय डाक्टर वा थेरापिष्टबाट पेशेवर समर्थन खोज्न सक्ने हुन सक्छ, गे भन्छन्। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ एक अधिक गम्भीर व्यसनको सामना गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक वा बाट SAMHSA को लागि राष्ट्रिय हेल्पलाइन, पदार्थ दुरुपयोग र मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रशासन ।
के तपाइँ रक्सी पिए पछि ibuprofen लिन सक्नुहुन्छ?
यसको मतलब के हुन्छ जब तपाइँको लार मोटो हुन्छ
कसरी खमीर संक्रमण घर उपचार बाट खुजली रोक्न
फ्लू ज्वरो ब्रेक पछि अझै संक्रामक छ
मतली को लागी काउन्टर औषधि भन्दा राम्रो